October 2019 - Page 2 of 3 - Puntland Mirror Believable Media Website
October 15, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Puntland ayaa maraakiib ajnabi ah ku eedaysay in ay kalluumaysi sharci daro ah ka wadaan biyaheeda. Shir jaraadid oo uu ku qabtay magaalada Boosaaso maanta oo Talaado ah wasiirka kalluumaysiga Faarax Cawaash Beeldaaje […]
October 12, 2019 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Axmed Maxamed Islaam oo loo yaqaan Axmed Madoobe ayaa loo caleemosaaray madaxweynaha Jubbaland maanta oo Sabti ah munaasibad ka dhacday magaalada Kismaayo. Munaasibada caleemosaarka ayaa waxaa ka qeybgalay masuuliyiin xilal hore soo qabtay […]
October 10, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Wefdi balaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta u safray magaalada Kismaayo, halkaas oo ay uga qeybgali doonaan caleemosaarka madaxweynaha Jubbaland. Munaasibada caleemosaarka Axmed Madoobe oo dabayaaqadii bishii Agoosto […]
October 9, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Wefdi wasiiro ah oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wadahadalo kula yeeshay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni gudaha magaalada Bosaaso. Wefdiga oo ay kamidyihiin wasiirka arrimaha dibada, wasiirka qorshaynta iyo wasiirka kalluumaysiga […]
October 7, 2019 Puntland Mirror 0
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland began to use the biometric system for its army registration. The presidential guards will be the first army to practice the system, according to a video clip issued by the presidency late […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa bilowday adeegsiga nidaamka tiknoolajiyada biometric si ay u diiwaangeliso ciidamadeeda. Ciidamada ilaalada madaxtooyada ayaa noqon doona kuwa ugu horeeyay ee ku dhaqma nidaamka, sida lagu sheegay muuqaal ay sii daysay madaxtooyadu […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa labo taliye booliis oo cusub u magacaabay gobolada Nugaal iyo Sanaag, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday madaxtooyada xilli dambe xalay oo Isniin ahayd. Muumin Cabdi […]
October 5, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Sabti ah kulan la qaatay wefdi ka soda UNSOM iyo IGAD. Kulanka ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada magaalada Boosaaso, halkaas madaxweynuhu maalmihii u dambeeyay uu […]
October 2, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa sheegay in ay dib u howlgaliyeen safaaradii ay ku lahaayeen Muqdisho, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya maanta oo Arbaco ah. “Maanta waxaan xaqiijinay xiriirka ka dhaxeeya […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hadlay sababta keentay in Puntland aysan ka qeybgalin shirka “Somali Partnership Forum”. Isaga oo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada Boosaaso oo uu xalay la yeeshay […]